Shiinaha PROTMEX PT202A Digital 12V - 1000V AC Danab Baadhayaasha Aan La Xiriirin Tijaabiyaha Pen Volt Tijaabada Korontada Warshad qalin iyo Soosaarayaasha | Ilaali
Sheyga ayaa cabbiri kara danab
1.Oput ku shaqeeya: Danab AC: 12 ~ 1000V (50 / 60Hz);
Xasaasiyad Sare: 12 ~ 1000V;
Dareenka Dhexe: 48 ~ 1000V;
2.Xasaasiyad hoose: kala sooc Live & Neutral;
Heerkulka Hawlgalka: 0 ~ 40 ℃,
Heerkulka Kaydinta: -10 ~ 50 ℃;
5.Humid: ≤ 85%;
6.Bateriga: 2 x 1.5V AAA
1. Badeecadu waxay ka samaysan tahay alaab ceeriin oo tayo sare leh waxayna leedahay qaab caadi ah;
2. Waa mid xasaasi ah oo sax ah xagga cabirka;
3. Yar yar oo miisaankiisu fudud yahay, ku habboon in la qaado;
4. Si fudud loo hawl galo oo si fudud loo isticmaalo
S: Waa maxay MOQ? Waqtiga hoggaanka?
J: Ma hayno MOQ dhammaan alaabooyinka, 1 PC sidoo kale waa caadi. Ku dhowaad dhammaan alaabooyinka ayaa ku jira keydka rarka degdegga ah, badiyaa 3 maalmood oo shaqo ah, laakiin mararka qaarkood macluumaadka saadka ayaa dib loo dhigi doonaa.
S: Miyaad aqbashaa adeegga OEM / ODM?
J: OEM iyo ODM labadaba si heer sare ah ayaa loo soo dhaweynayaa ilaa iyo inta aad la kulaneyso MOQ waxaanan doorbideynaa amarrada sida OEM iyo ODM maadaama tiradu ay badan tahay macaamiishooduna ay joogto yihiin.
S: Waa maxay adeeggaaga iibka kadib iyo dammaanad qaadkaagu?
J: Dammaanaddeenu waa hal sano oo annaguna bilaash ayaan kuugu hagaajin karnaa damaanad gudahood illaa inta dhibaatada aan shakhsi ahaan loo samayn. Haddii dhibaatooyin shaqsiyadeed iyo dammaanad-qaad la'aan markaa iibsadaha waa inuu bixiyaa khidmadda dhoofinta iyo khidmadda dayactirka haddii loo baahdo. Waxyaabaha yaryar waxaan u diri karnaa beddelaad bilaash ah si xigta.
S: Waa maxay muddada lacag-bixintaada iyo muddada ganacsigaagu?
J: Waxaad noogu bixin kartaa paypal, wechat, kala iibsiga bangiga, qaab kasta waa caadi, tusaale ahaan waxaan inta badan ku dirnaa xawaaraha sida DHL, EMS, UPS, Fedex, Aramex iwm , FOB, EXW, DAP, CIF dhammaantood waa la aqbalay.
S: Sideen kuu aamini karnaa oo sidee baan kuu heli karnaa haddii aadan soo dirin badeecada?
J: Waxaan ku suganahay Degmada NanShan, Shenzhen, waxaad weydiisan kartaa saaxiib kasta oo Shiinaha ah inuu na soo booqdo. Ka dib markii amarkaaga la dhigo, haddii aanaan markab ku raacin waqtigii loogu talagalay, waad noo caban kartaa. Haddii aad wax ku bixiso escrow ama paypal, xitaa way ka ammaan badan tahay. Waxaad naga heli kartaa websaydh / Email wakhti kasta (24 saacadood * 7 maalmood), haddii aanaan ka jawaabin waqtiga loogu talagalay waxaa laga yaabaa inaan seexanno inta lagu jiro habeenkii, waxaan kuugu soo jawaabi doonnaa asap.
S: Sidee loo dalbadaa amar?
J: Waad dooran kartaa nooca iyo tirada aad rabto, ka dib waxaan hubinaynaa khidmadda dhoofinta oo aan kuu soo diri doonaa qaansheegadka Proforma si aad u bixiso. Bixinta khadka tooska ah ee bangiga lagu wareejiyo waa la xiray, kuwa kalena sidoo kale waa caadi. Ka dib markaad na siiso waxaan toos ugu soo diri doonnaa cinwaankaaga, ka dib waxaad bixinaysaa inaad taleefanno ka hesho xawaare maxalli ah si aad u bixiso canshuur haddii loo baahdo, ka dib intaas ayay ku soo gaarsiinayaan. Fadlan ha ilaawin inaad na siiso jawaab celin haddii aad ku qanacsan tahay badeecada iyo adeegeena.
Hore: PROTMEX PT19D Dijital Hygrometer Gudaha Heerkulbeegga Heerkulbeegga iyo Qulqulka Muujinta Qolka Heerkulbeegga